Tokony ho tamin’ny 5 ora hariva dia mpiandry omby handeha hamonjy fodiana no nahatsikaritra kitapo tao anatin’io tatatra io. Rehefa nojeren’izy ireo dia taolana no tao anatiny, ka niantso avy hatrany ny manodidina izy ireo. Nifamory avy hatrany ny fokonolona ary nijery ny zava-nisy sao sanatria fasana teny amin’ny manodidina io nisy namaky io, saingy tsy nisy moa izay. Taolan-dava avokoa, toy ny mahazatra ireo nisy nangalatra ireo, ary kitapo rofia 3 no nasiana azy. Ny iray no tena feno ilay kitapo, raha somary tapatapany kosa ireo roa ambiny. Nidina teny an-toerana io hariva io ihany ny polisy, ka nanaovan’ny kaomisera Andrianaja Patrick antso avo, izay olona mety ho nanana fasana vaky tany ho any na manodidin an’Antsirabe mba hanatona ny tompon’andraikitra sy ny biraon’ny polisy haingana alohan’ny handevenan’ny avy eo anivon’ny Bmh ireo taolana. Matetika indray ity vaky fasana ity tao Vakinankaratra ary tranga fanaon’ireo tsy mataho-tody indray ny mametraka ireny taolana ireny amin’ny toerana somary lavitry ny nangalarany ireo taolana ireo ka manano sarotra ny mikaroka izay fasana metyho nahaverezany.